Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: လက်ပန်းတောင်းတောင်အကြမ်းဖက်မှုတရားခံတွေကိုအရေးယူလို.ရပါ့မလား?
အကယ်၍လက်ပန်းတောင်းတောင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ.ပတ်သက်ပြီးသန်းရွှေရဲ.တပည့်များစီစဉ်ခဲ့တယ်လို.ကော်မရှင်ကစုံစမ်းတွေ.ရှိရင်ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ? သန်းရွှေကိုသိန်းစိန်းကမထိရဲဘူး၊လွှတ်တော်ကလည်းမလှုပ်ရဲဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လို.ရမလဲဆိုတာဖြေပေးပါတစ်ခါတည်း၊ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလူသတ်ပွဲကြီးကိုလည်းစုံစမ်းပေးပါ၊ဒီပဲယင်းကိုလည်းစုံစမ်းပေးပါ၊လာဘ်စားသည့်ဝန်ကြီးဌာနများပေးသွင်းရမည့်နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာများငွေများကိုလည်းအခုအချိန်အထိမပေးသွင်းသေးပါ၊ဘာအရေးယူမှမှုမရှိသေးဘူး၊အဲဒါကိုလည်း၊ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? စုံစမ်းပြီးရင်ပြီရောဆိုသည့်သဘောနဲ.ဆိုရင် လူထုရဲ.တိုက်ပွဲအရှိန်လျော့သွားအောင်အရင်လုပ်ပြီးလူထုကိုစိတ်ငြိမ်းဆေးတိုက်ပေးသလိုဖြစ်မနေဘူးလား?ဒါဟာ၊စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုပ်ရာတွင်းရန်သူလှုပ်ရှားမှုရပ်တန်.အောင်လုပ်သည့်သဘောပဲ၊စ်ိန်းအောင်မင်းလိုက်လုပ်နေသလိုပေါ့၊ငြိမ်းချမ်းရေးစကားနဲ.မျှော်လင့်ချက်ပေးထားပြီးအနောက်ကနေဗမာစစ်တပ်ကအင်းအားဖြည့်လို.ရအောင်အချိန်ယူလိုက်တာပါ၊အာရုံပြောင်းလိုက်တာပါ၊
ုံရင်စောင့်ကြည့်ပါ၊ မတရားလုပ်သည့်လူတွေကိုအရေးယူမှုမရှိ၊အကာအကွယ်ပေးနေသမျှကာလပတ်လုံး ဒီတိုင်းပြည်ကမတရားမှုသင်ပေးသည့်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ၊ဗမာပြည်မှာမတရားလုပ်လာခဲ့သည့်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကအရာရှိစစ်ဗိုလ်တွေကိုတစ်ခါမှအရေးယူခံရမှုမရှိခဲ့သည့်သမိုင်းဟာထူးဆန်တယ်၊သူတို.အချင်းချင်းအာဏာလု၊အာဏာပြိုင်တာကလွဲရင်ပေါ့၊ နေဝင်ကသန်းရွှေနှိပ်စက်လို.၊သန်းရွှေကဒီအတိုင်ဘဲကျန်နေတုန်း၊ခင်ညွန်.ကလည်းသန်းရွှေနှိပ်စက်လို.ခံရတာပါ၊ပြည်သူအပေါ်ရာဇာဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်ဟာတွေ၊တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့သည့်လူသားမဆန်သည့်ရာဇာဝတ်မှုကိုအခုအချိန်အထိအရေးယူမှုမရှိသေးပါ။